Merkel, Macron sa Biden? Tsia, i Shina no itokian’i Amerika Latina amin’ny resaka vaksiny · Global Voices teny Malagasy
Nahomby ny lalaon'ny diplaomasian'ny vaksiny nataon'i Shina tao Amerika Latina
Voadika ny 19 Jolay 2021 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, Esperanto , Español
Sary fanaingoana nataon'ny Connectas, nahazoana alàlana tamin-dry zareo.
Iván Ruiz, mpikambana ao anatin'ny kaomitin'ny famoahan-dahatsoratry ny Connectas no tompon'ny lahatsoratra niaingàna. Tany am-boalohany dia tao amin'ny Connectas izy ity no navoaka ary nokiraina sy naverin'ny Global Voices navoaka etoana.
Tonga indray i Shina hanavotra ireo firenena ao Amerika Latina ao anatin'izao fotoan-tsarotra misy an-dry zareo izao. Tamin'ny faran'ny 2020, nitombo be ny taham-pahafatesana tao Brezila, Ekoatora, Però, ary hatrany amin'ireo firenena hafa ao amin'ny faritra. Nahazo fatram-baksiny an-tapitrisa i Eorôpa sy Etazonia saingy tsy nisy tonga tany Amrika Latina izy ireny. Teto, hitan'i Shina fa sady misy fotoana fanararaotra ara-toekarena sy ara-pôlitika izany. Ankehitriny, saika ny ankamaroan'ireo firenena ao Amerika Latina no mampanao vaksiny ny vahoakany amin'ireo vaksiny avy any Shina, tsy misy fisalasalàna.
Ny olona iray ao anatin'ny fianakavianao, namanao, na mety ho ny mpampianatra ny zanakao dia efa mety nahazo ny fatram-baksininy Sinopharm na CoronaVac (Sinovac). Kanefa, ny “diplaomasian'ny vaksiny,” araka ny iantsoan'ireo manampahaizana manokana an'io pôlitika io, dia tsy hafa fa ny farany indrindra monja ihany amin'ireo andiana hetsika mampiseho ny fahalinana tsy misaha-mitombo ananan'i Shina any amin'ilay faritra. Hita indrindra izany ao anatin'ilay fisandratana vao haingan'ny rantsan'ny tetikasa fanaovana fotodrafitrasa sy fampiasambola goavan'i Shina ao Amerika Latina, fantatra amin'ny anarana hoe New Silk Road,(Làlam-baovaon'ny lamba landy) izay nandroso tokoa tato anatin'ny efatra taona farany tao amin'ny faritra, zavatra iray tsy noraharahian'ny filoha amerikàna teo aloha, Donald Trump.
Tamin'ny voalohany, nitarin'i Beijing ny dindony amin'ireo vokatra fototra avy ao Amerika Latina. Avy eo, nanomboka namatsy vola tetikasa fanaovana fotodrafitrasa goavana i Shina (indrindra fa ireo mifantoka amin'ny resaka angovo) ary, farany, nanome fampindramam-bola izy ho an'ireo firenena izay tsy ho afaka mihitsy nahazo loharanombola teo amin'ny tsena iraisampirenena raha tsy nisy an'izany.
Vata fampangatsiahana miaty fatram-baksiny Sinovac 1.000.000 ao Hong Kong. Efa an-dàlana hankaty sahady izy ireny. Rahampitso dia ho tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina CDMX [ao Meksika] vao maraim-be. Efa afaka hita mazava eto izao ny fanampian'i Shina!
Tamin'ny voalohany dia ny vokatra ara-tsakafo no nahaliana an'i Shina, izay mbola novidiana tany Brezila sy Arzantina, saingy nohamaroiny tamin'ny an'ireo firenena hafa tao amin'ny faritra toa an'i Ekoatora, izay toerana anaovan'i Shina famantsiambola tetikasa momba ny angovo. Ny fipetrak'i Venezoelà manohitra an'i Etazonia dia nitondra io firenena io hanakaiky an'i Shina, izay lasa mpampindrambola lehibe indrindra ho azy. Araka ilay fiteny hatrizay hoe, ny fahavalon'ny fahavalonao dia namanao. Talohan'ny valanaretina, efa natombok’ Shina ny fanorenana fifandraisana matanjaka tamin'i Meksika, Shily ary Però — firenena manana tsena anatiny midadasika be—mba hampiasàna vola anatin'ny sehatry ny fanomezana tolotra ao amin-dry zareo.
“Rehefa miray latabatra amina firenena matanjaka toa an'i Shina ianao, mitondra fampiasambola goavana be ho eo ambony latabatra izany. Anatin'izay sahan-kevitra izay, lohahevitra iray hafa fotsiny ao anatin'ny fandaharanasany ny vaksiny,” hoy i Federico Merke, Profesora mampianatra ny Fifandraisana Iraisampirenena ao amin'ny Anjerimanontolo San Andrés ao Arzantina. “Tena manana toerana be any Amerika Latina i Shina, izay tsy mitsahatra ny mitatra tato anatin'ny folo taona farany. Ny fanaovana fandraharahàna miaraka amin'i Shina dia sady ahazoana tombony no mety misy kinanga tsy ampoizina. Isan'ny tombony ny fahafahana mahazo vaksiny, fa ny mety tsy ho ampoizina dia ny fifamatorana amina firenena iray tsy mpanaja zon'olombelona, tsy mivaky loha amin'izay fiarovana ny tontolo iainana ary tsy mitsitsy mihitsy amin'ny fanekena na fandoavana kolikoly,” hoy izy.
Federico Urdinez, manampahaizana manokana momba an'i Shina, avy ao amin'ny Anjerimanontolo Katôlika ao Shily, raha namarana fandalinana iray tany amin'ireo firenena fito ao Amerika Latina, dia nangataka tamin'ireo mpandray anjara momba ny fahitan-dry zareo an'i Shina. Saika nirona tamina valinteny nitovy avokoa ireo nametrahana fanontaniana: coronavirus. Mbola tsy afaka ao an-tsain'ny maro amin'ireo Amerikàna Tatsimo ireo fahatsiarovana ny tao an-tsenan'i Wuhan, ary i Shina no kianin-dry zareo ho fototry ny zava-mangidy iainan-dry zareo.
Nofaranan'i Urdinez fa hoe tany am-piandohana, tsy nahomby ny “diplaomasian'ny sarontava” nataon'i Shina, izay misy an'ireo fanolorana arontava tonga tao Amerika Latina nandritra ireo volana henjana indrindra nisian'ilay valanaretina. Kanefa, rehefa naverin'ny Anjerimanontolo Katôlika ao Shily fito volana taty aoriana ilay fandalinany, niova ny fomba fijery. “Ny fahasimbàn'ny lazany izay tsy vitan'ireo arontava ny nanarina azy, vitan-dry zareo tamin'ny alàlan'ny vaksiny kosa. Nihatsara ankehitriny ny sarin'i Shina eny anivon'ny vahoaka ao Amerika Latina,” hoy i Urdinez nanazava.
Tonga niaraka tamin'ny andiana fampiasambola goavana nararak'i Shina tao Amerika Latina ireny fanafody tena nilaina ireny. Teo anelanelan'ny 1990 sy 2009, nahatratra 7 lavitrisa dolara amerikàna ireo fampiasambola ataon'i Shina ao amin'ny faritra. Kanefa, nihoatra ny 64 lavitrisa io tarehimarika io teo anelanelan'ny 2010-2015, taorian'ny nanombohan'i Shina ilay tetikasany “Làlan'ny Lamba Landy” izay nanome lanja manokana an'ilay faritra.
Tamin'ny 2019 i Brezila, izay mpamokatra be indrindra ny sôza manerana izao tontolo izao, dia nivarotra tamin'i Shina ny 80% tamin'ny vokatra avy ao aminy. Etsy ankilany, natolotr'i Brezila ho tantanin'ireo Shinoa mpampiasa vola ny fifehezana seranantsambo ara-barotra miisa 13, ary amin'izao fotoana izao dia mihevitra ny hanolotra 15 hafa izy. Arzantina koa nivarotra tamin'i Shina ny 80% tamin'ny sôza novokariny, raha ilay Aziatika goavana indray kosa nampiasa vola tamin'ny sehatry ny solika ary nanome fampindramambola ho an'ilay firenena mba ho entina manorina zotran-dalamby sy seranantsambo.
Manana fatram-baksiny 1 tapitrisa isika, sidina iray avy any Shina no tonga ao [amin'ny seranan'i Arzantina ao] Ezeiza mitondra vaksiny Sinopharm. Manana isika 6.8 tapitrisa, efa nahavita sahady nitsinjara 5.200.000.
Isaorana ianareo mpiasan'ny Aerolíneas Argentinas sy ireo rehetra niasa nahafahana nahazo antoka ny hahazoan'ny teratany tsirairay eto Arzantina ireny vaksiny ireny.
Ny fanomezan-dàlana nomen'ny morontsiraka shiliàna ao amin'ny Pasifika dia nahafahan'ny firenena nanao sonia fifanarahana fifanakalozana malalaka miaraka amin'i Shina, izay lasa ho iray amin'ireo mpampiasa vola voalohany amin'ny resaka angovo sy ny lithium. Fanampin'izay, efa i Shina koa no mpamatsy vola voalohany an'i Bôlivia, ary Venezoelà kosa mahazo tolotra avy amin'i Shina, mihoatra noho izay azon'ireo firenena hafa: fanomezana vola nihoatra ny 62 lavitrisa dolara amerikàna, araka ny angondrakitra avy amin'ny Inter-American Dialogue.
Na ahoana na ahoana, amin'izao fotoana izao, toa mahomby ny diplaomasian'ny vaksiny ampiasain'i Shina. “Afaka folo taona, dia azo antoka fa ho tsaroantsika hoe iza no nanampy antsika nandritra ny krizin'ny valanaretina coronavirus. Angela Merkel, Emmanuel Macron, sa John [Joe] Biden? Tsia. Shina irery ihany no nanampy an'i Amerika Latina ary manomboka mandihy amin'ny gadona apetrak'i Shina daholo ireo firenena aty amin'ny faritra, tsy noho ny ideôlôjia iraisany fa noho ny faniriana hamahàna olana iray tsy mbola nisy toa azy,” hoy i Enrique Dussel Peters, mpandrindra ny tambajotran'ireo Latino-Amerikàna nandranto fianarana ambony momba an'i Shina.
Ankasitrahako ny fihetsehana nalaky nataon'ny governemanta shinoa, hatramin'ny fanolorantenan'ireo minisitra @ItamaratyGovBr @ernestofaraujo , @minsaude Eduardo Pazuello sy @Mapa_Brasil @TerezaCrisMS
Etsy andaniny, ny diplaomasia malefaka (misoko mangina) tahaka izany koa dia afaka manome tombony pôlitika sy toekarena ho an'i Shina. Araka izany, i Brezila ambany fitondran'i Jair Bolsonaro, ilay filoha LAtino-Amerikàna izay fatra-panohitra ny fidiran'ny fampiasambola shinoa, dia nihemotra nanaisotra ny sakana tsy hahafahan'ny Huawei hifaninana amin'ny fametrahana ny tambajotra 5G ao amin'ny fireneny. Tena katsahan'ireo mpisehatra goavana amin'ny tsenan'ny fifandraisan-davitra ao amin'ny firenena ny karazana fandraharahàna ara-barotra tahaka izany, ary marobe ireo firenena no nanao ankivy ilay orinasa miorina ao Shenzhen. Andro vitsy taorian'ny naharaisan'i Brezila ireo vokatra fototra avy any Shina ho entina mamokatra ny CoronaVac ao Brezizla no nitranga io fiovampenitr'i Bolsonaro momba ny Huawei io.
Na resaka fandraharahana ara-barotra sy fitarana ara-jeôpôlitika fotsiny aza, ny kiakiaka nitadiavana vaksiny sy ny tsy naha-teo an'i Etazonia hiantoka ny fahazoana ireo fatram-baksiny any amin'ireo firenena mahantra indrindra dia nametraka hirika kely nahafahan'i Shina nanohy ny fanitàrana nataony. Efa taompolo maro i Shina no nanolo-tena nanao zavatra ho an'i Amerika Latina, ary nampiasainy ny diplaomasian'ny vaksiny mba hanamafisany ny fisiany ao amin'ilay faritra. Raha jerena ny zavatra rehetra dia maneho fa, taorian'ny taona marobe nikolokoloany ny dindony tao Amerika Latina, toa efa vonona ny hitazona ny laharana voalohany ao amin'ny faritra i Shina ankehitriny.